Dowladda Oo Xaqiijisay Inay Bukaanno Kale u Geeriyoodeen Cudurka COVID-19 – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray April 15, 2020
Dowladda Oo Xaqiijisay Inay Bukaanno Kale u Geeriyoodeen Cudurka COVID-19
Muqdisho, Arbaco, April 15, 2020— Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay geeriyoodeen sedax qof oo kamid ah dadkii uu gudaha dalka ku helay cudurka COVID-19, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigeysa 5 ruux.
Wasiirka Caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Fowsiya Abiikar Nuur, ayaa warbxinta maalinlaha ah ee arrimaha COVID-19 ku sheegtay in sidoo kale la diiwaan geliyay labaatan xaaladood oo cusub. Tirada guud ee xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaaray 80 xaaladood.
Marwo Fowsiya Abiikar Nuur ayaa ugu baaqday dadka Soomaaliyeed inay si saxan u qaataan talooyinka caafimaad ee qaybta ka ah qorshaha xakameynta cudurka maadaama uu si xawaare leh dalka ugu faafayo, muhiimna ay tahay in laga wada shaqeeyo bed-qabka umadda.
Dowladda Soomaaliya oo daryeelka bulshada uu u yahay muhiimadda Koowaad ayaa dadaal xooggan ugu jirta xakameynta cudurkaan COVID-19 ee dhibaatada badan ku haya caalamka.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaaraha Oo Go’aamiyay in Maamul Goboleedyada & Gobolka Banaadir La Siiyo Lacago Ay Uga Hortagaan Covid-19
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Khayre: Masiibada maanta waxaa ka nabad galaya kuwa dhagaysta talooyinka bahda Caafimaadka.